Etu esi wụnye dijital dijitalụ na ekwentị gam akporo | Gam akporosis
Miguel Hernandez | 07/04/2021 08:39 | Nkuzi
Asambodo Digital Ọ ghọwo otu n'ime ngwanrọ kachasị ewu ewu na ihe nchekwa na oge ndị a, ọ dịkwa oke mkpa ịnwe ike ịme ọtụtụ usoro nke ụdị ọ bụla site na ngwaọrụ mkpanaka anyị na-enweghị mkpa iji lebara ụdị nchịkwa ọhaneze ọ bụla anya.
Ya mere, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ karịsịa na anyị jikwaa ịwụnye Digital Asambodo na ekwentị anyị. Anyị na-egosi gị otu ị ga - esi wụnye Asambodo Dijitalụ na ekwentị gam akporo gị na ụzọ kachasị mfe, yana ị nwere ike ịme usoro a na - apụghị ịgụta ọnụ na ụzọ kachasị ọsọ ma dị nchebe.
1 Kedu ihe bụ Digital Digital?
2 Nweta Asambodo Digital site na gam akporo
3 Nweta site na PC ma wụnye ya na gam akporo
4 Jiri DNIe na gam akporo
Kedu ihe bụ Digital Digital?
Inwe ike ịrụ ọrụ na teknụzụ a na-achọsi ike ịmata, ihe na-erughị mbụ Ka anyị mee ka o doo anya ụdị sọftụwia anyị ji arụ ọrụ. Heard nụla ọtụtụ oge banyere Asambodo Dijitalụ, n'eziokwu ọtụtụ weebụsaịtị nke gọọmentị ọha na eze, ma mpaghara ma ọ bụ steeti, na-enye gị ohere iji usoro njirimara nke a iji nwee ike ịme usoro n'ekwe ntị. Agbanyeghị, ọ nwere ike ịbụ na ị maghị ihe ha na-ekwu, ọ bụ ya mere anyị ji nọrọ ebe a taa, iji kụziere gị ihe Digital Certificate bụ.
Akwụkwọ Digital nke FNMT (National Currency and Stamp Factory) Ọ bụ ụzọ iji mata onwe gị na ibe weebụ ọ bụla n'ụzọ echedoro. N'ụzọ doro anya, ebughị n'obi ịbanye na akaụntụ Instagram gị, mana mgbe weebụsaịtị a nwere ozi dịkarịsịrị mkpa maka nzuzo nke onye ọrụ, dịka Treasury, DGT ma ọ bụ City Council na ọrụ. Ihu ọma ọ dị ka njirimara anyị dijitalụ, dị ka DNI anyị n'ụdị ngwanrọ. Na nkenke, ọ bụ njirimara zuru oke nke mmadụ gị site na digitally, dịka NJ gị nwere ike ịbụ mgbe ịchọrọ iji mata onwe gị ebe. Nke a dị mma inwe ike ịhazi usoro anyị niile.
Nweta Asambodo Digital site na gam akporo
Anyị nwere ike inweta Asambodo Digital anyị ozugbo site na ngwaọrụ gam akporo, ihe ga - eme ka usoro a dị ngwa. Ruo n'oge na-adịbeghị anya ọ ga-ekwe omume inweta Asambodo Digital site na PC na ọnọdụ siri ike nke mere ka ọtụtụ ndị ọrụ kwụsị ịgba mbọ ahụ. Agbanyeghị, ọ dị ịtụnanya otu anyị nwere ike isi nweta Digital Asambodo ozugbo site na gam akporo site na iji sistemu nke National Currency and Stamp Factory mere ka anyị nwee, maka nke a anyị ga-ebudata ngwa ndị a:
Gam akporo ngwa: Inweta Asambodo FNMT
Ozugbo anyị banyere ngwa ahụ, ọ ga - enye anyị naanị nhọrọ abụọ: Arịrịọ / Na-echere arịrịọ. N'okwu a, ihe anyị ga - eme bụ ihe ndị a:
Anyị na-enweta Asambodo Mgbọrọgwụ site na FNMT ma wụnye ha na anyị Android site na nbudata ya na Playlọ Ahịa Google.
Anyị na-emeghe ngwa ahụ iji nweta akwụkwọ FNMT
Pịa bọtịnụ «Arịrịọ»
Anyị na-ejuputa data kwekọrọ na DNI ma ọ bụ NIE anyị, aha nna mbụ anyị na ozi email anyị ga-achọ ma emechaa.
Anyị na-ahọrọ ụlọ ọrụ na-edebanye aha ikike iji gosipụta njirimara anyị n'onwe anyị na anyị ga-eji DNI anyị na koodu nke ha zigara anyị na DNI.
Ozugbo njirimara anyị gosipụtara, anyị laghachi na ngwa ahụ wee pịa "arịrịọ na-echere"
Ugbu a, anyị nwere ike ibudata Asambodo Digital anyị n'ụzọ kachasị ọsọ
Dị ka ị hụrụ Ọ dị mkpa na ikpe niile ka ị mata onwe gị na DNI ma ọ bụ NIE gị iji nye ikike nbudata ahụ, ịnwere ike ịchọta map mmekọrịta nke ọfịs ebe ị nwere ike igosipụta njirimara gị maka Asambodo Dijitalụ na maapụ ụlọ ọrụ mmekọrịta.
Ọrụ a anaghị akwụsị ebe a, ịga n'ihu ịwụnye Asambodo Digital gị yana usoro ndị a:
Download ya na njikọ nke ngwa ahụ anyị kwuru maka ya na mbụ
Pịa nabata na "Ngwa na VPN"
Ọ ga-arụnyere ngwa ngwa na mfe
Anyị na-akwado ka ị wụnye asambodo na mgbọrọgwụ nke gam akporo ngwaọrụ ma ọ bụ na SD kaadị ebe nchekwa, ebe ọ bụ na Asambodo ndị enwetara na gam akporo enweghị ike ịbupu, naanị ehichapụ ma webata ya, yabụ anyị agaghị enwe ike iji ya na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Nweta site na PC ma wụnye ya na gam akporo
N'ụzọ doro anya, anyị nwekwara ike ibudata FNMT Dijitalụ Asambodo nke Onye Okike ozugbo na PC ma wụnye ya ma emesịa na ngwaọrụ gam akporo anyị, n'eziokwu ọ dị m ka ụzọ kachasị mma iji nweta ọtụtụ akwụkwọ nkwado mgbe niile ma wee hụ na anyị anaghị efunahụ anyị. akwụkwọ a dị mkpa. Ihe mbụ bụ ịmata ihe Ihe nchọgharị dakọtara iji nweta FNMT Digital Certificate na Windows PC:
Agbanyeghị, maka nke a, anyị ga-ebu ụzọ wụnye asambodo mgbọrọgwụ nke FNMT ozugbo na PC anyị, yana faịlụ ndị ọzọ dị mkpa maka ọrụ a. FNMT kere a Onye nhazi FNMT nke ga - eme ka ọrụ dịrị anyị mfe, na ihe ọ na - eme bụ ịwụnye ihe niile anyị chọrọ ngwa ngwa na akpaghị aka dịka o kwere mee.
Budata FNMT Digital Asambodo nhazi
Ozugbo anyị ebudatara ya ma wụnye ihe niile dị mkpa iji wụnye Asambodo Digital anyị na PC anyị họọrọ, anyị ga-aga n'ihu na usoro ndị a:
Anyị tinye web ịrịọ akwụkwọ ikike dijitalụ.
Anyị na-ewebata DNI ma ọ bụ NIE anyị
Anyị na-abanye aha nna mbụ anyị dị ka ọ dị na DNI ma ọ bụ NIE
Anyị tinye email anyị ma hazie ya n'okpuru
Ugbu a, anyị pịa bọtịnụ «Send arịrịọ»
Ozugbo anyị zipụrụ arịrịọ ahụ, a ga-emepụta koodu ntinye ma anyị ga-emeworị usoro mbụ iji nweta Asambodo Digital. Nzọụkwụ ọzọ bụ na ị na-achọpụta onwe gị na DNI ma ọ bụ NIE gị Iji nye ikike ikike nbudata ahụ, ịnwere ike ịchọta maapụ gọọmentị nke ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike igosipụta njirimara gị maka Asambodo Dijitalụ na maapụ ụlọ ọrụ a.
N'ikpeazụ ị gara FNMT Asambodo Nbudata ebe nrụọrụ weebụ ebe ọ bụrụ na ị kwadoro nnabata gị nke ọma site na ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha, ị ga-enwe ike ibudata asambodo ahụ site na itinye DNI ma ọ bụ NIE gị, aha nna mbụ na koodu arịrịọ ha zitere gị site na email.
Ugbu a ọ bụ oge iji wụnye Digital Asambodo na gam akporo mgbe anyị nwetara ya site na PC. Maka nke a, anyị ga-aga ngalaba nke «Akwụkwọ nchịkwa» na ngalaba «Nche» na ihe nchọgharị weebụ nke anyị ji ibudata dijitalụ Asambodo. Mgbe ahụ, anyị ga-pịa nhọrọ «Mbupụ nke Asambodo na onwe igodo». A nzọụkwụ ọ ga-ekwe ka anyị ekenye a paswọọdụ na dijitalụ akwụkwọ na .PFX usoro, Ọ bụrụ na ibudata ya na usoro .CER, ị ga-eme ya ọhụma ma anyị na-akwado ka ịlaghachi na mbido.
Iji wụnye ya na ngwaọrụ gam akporo anyị naanị anyị ga-ezitere anyị faịlụ ahụ .PFX nke anyị budatara site na ụdị ikpo okwu ọ bụla. Ekwadoro m ka ịchekwa ya na Google Drive iji nwee nkwado ndabere oge niile, mana ị nwere ike iziga ya na ngwaọrụ gam akporo gị site na eMail ma ọ bụ Telegram, ozugbo ịpịrị ya, soro usoro ndị a:
Pịa ma budata faịlụ .PFX
Ma nke ahụ bụ mfe ị nwetala Asambodo Digital site na PC gị ma jikwaa mbupụ ya ka ọ dịrị na gam akporo yana ebe ọ bụla ịchọrọ. Agaghị eme usoro a na ntụgharị, ebe ọ bụ Asambodo ndị enwetara na gam akporo enweghị ike ịbupu, naanị ehichapụ ma webata ya, yabụ anyị agaghị enwe ike iji ya na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Jiri DNIe na gam akporo
Agbanyeghị na Asambodo Digital bụ nke kachasị baa uru, iji pụọ na nsogbu anyị nwere ike iji NFC onye na-agụ gam akporo ngwaọrụ iji mata onwe anyị site na DNIe. Iji mee nke a, ihe mbụ anyị ga - eme bụ ibudata ngwa kwekọrọ:
Nweta ngwa na DNIe maka gam akporo.
Ugbu a, anyị ga-agba mbọ hụ na anyị nwere paswọọdụ ha nyere anyị mgbe anyị nwetara DNI n'oge ahụ, anyị na-eme usoro ndị a:
Mepee ngwa ma họrọ ebe ịchọrọ ịbanye
Họrọ nzube nke njirimara
Mata DNIe gị
Tinye PIN nnabata enyere gị n’aka ndị uwe ojii mgbe ị mere DNI
Ugbu a ị ga-enweta ọrụ ị họọrọ na-akpaghị aka n'ụzọ kachasị ọsọ ma kachasị mfe, yabụ na a ga-amata gị na njirimara gị. O di nwute, enweghi otutu ochichi ndi kwekorita ha na DNIe n'oge a, ọ bụ ezie na n'ezie ha ga-eto n'oge na-adịghị anya nyere mkpa ndị ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu esi etinye asambodo dijitalụ na ekwentị gam akporo